နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့(14 များအတွက်စုစုပေါင်း Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ ထုတ်ကုန်များ)
Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Dedusting နဂါးကေ့အရိုး
tag ကို: Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ , အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်
မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်၏မော်ဒယ်ဖော်ပြချက်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုဖုန်မှုန့်အိတ်လှောင်အိမ်, အထည်အိတ်အရိုးစု, ဒါပေါ်မှာမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးဘောင်, မြေမှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုများနှင့်ပါဝင်သည်။...
tag ကို: Organosilicon Dedusting ကေ့အရိုး , Dedusting Bag ကေ့ကိုလေပေါ်မှာပ , ပလပ်စတစ်ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
လည်းမြေမှုန့်အိတ်လှောင်အိမ်အဖြစ်လူသိများဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်, အိတ် filter ကိုများအတွက်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏အဓိကအမျိုးအစားများပါဝင်သည်: 1. ပတ်ပတ်လည်အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင် (ပြင် filter...
အဆိုပါ Grey ကလညျးမီးဖိုအတွက် Organosilicon လေ့လာကြရအောင်
tag ကို: သံမဏိလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှုန်ရေမွှားလေ့လာကြရအောင် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးအိတ်ကေ့
Rotary ပူးတွဲ Organosilicon လေ့လာကြရအောင်
tag ကို: INSERT သံမဏိလေ့လာကြရအောင် , multi ပူးတွဲအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးလေ့လာကြရအောင် , Venturi Tube နှင့်အတူ Spliced ​​ကေ့
Anticorrosion အရိုးစုဖုန်မှုန့်အိတ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်အရိုးစု၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်ဖို့ဆီလီကွန်နည်းပညာနဲ့ကုသနေပါတယ်။...
segment Dedusting Organosilicon လေ့လာကြရအောင်
tag ကို: ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Organosilicon ကေ့အရိုး , ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုဂတ်စ်၏အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးလေ့လာကြရအောင် , elliptical Dedusting Bag ကေ့
ဖုန်မှုန့်အရိုးစုမျက်နှာပြင်၏ကုသမှု Galvanizing ဘုံသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့်အရောင်သွပ်ရည်စိမ်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဇင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု plating galvanizing ပြီးနောက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏မျက်နှာပြင်ဆက်ဆံဖို့တစ်လမ်းဖြစ်၏။...
အိတ်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး Organosilicon Frame က
tag ကို: အထူး-ပုံ Organosilicon Bag ကေ့ , Chuck သံမဏိလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Filter ကိုအိတ်ကေ့
အရိုးစု organosilicon dusting ၏ Surface ကကုသမှု ဆီလီကွန်နည်းပညာဖြင့်ကုသမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု 280 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်တွင်စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးနှင့်၎င်း၏ချက်ချင်းအသုံးပြုမှုအပူချိန် 300...
စက်မှု organosilicon dedusting ဘောင်
tag ကို: silicone ဖုန်ဖယ်ရှားရေးလေ့လာကြရအောင် , silicone ဖုန်ဖယ်ရှားရေး Frame ကဈေးနှုန်း , ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး Frame က
ဖုန်မှုန့်အရိုးစု၏ထောက်လှမ်းဘို့ Key ကိုအချက်များ အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသုံးပြီးနှင့်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကမကြာခဏကြောင့်လျစ်လျူရှုဒါအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏နံရိုးကဲ့သို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု, install ထိန်းသိမ်းနည်းရန်လွယ်ကူသည်။...
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Dedusting နဂါးကေ့အရိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆိုပါ Grey ကလညျးမီးဖိုအတွက် Organosilicon လေ့လာကြရအောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rotary ပူးတွဲ Organosilicon လေ့လာကြရအောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
segment Dedusting Organosilicon လေ့လာကြရအောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး Organosilicon Frame က အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု organosilicon dedusting ဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ from China, Need to find cheap Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့, We'll reply you in fastest.